Iflethi Yale Mihla | Indawo Yabucala Yokungena Kwibhedi Nendawo Yokuhlamba - I-Airbnb
Iflethi Yale Mihla | Indawo Yabucala Yokungena Kwibhedi Nendawo Yokuhlamba
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJessica
Wamkelekile! I-suite yethu yangoku ibonelela nge-combo epholileyo yebhedi-n-bath enokungena kwabucala ukusuka kumgangatho. Bukela iNetflix kumabonwakude ukusuka kwibhedi ye-foam yememori, gcina okushiyekileyo kwifriji encinci, kwaye uvuke kwikofu yaseKeurig kusasa! I-intanethi ye-Gigabit fiber kunye neyunithi yomoya yabucala yombane, nayo. Simi kwindawo ezolileyo, enemithi kufutshane ne "Crossroads" yase-US-1 kunye ne-I-40, umgama nje omfutshane ukuya naphi na kwiTriangle. Sijonge ukukubamba! (Nceda ufunde imithetho epheleleyo kunye nenkcazo.)
Siyayithanda indlu yethu kwaye senza konke okusemandleni ethu ukuyenza ibe ntle. Yonke into isandula ukulungiswa. Siyavuya ukunika izinto ezibalulekileyo zokuhlala kwakho - iitawuli, isepha, ishampu, isomisi seenwele, njl.njl Qaphela: iTV ineNetflix kunye neYouTube kodwa hayi intambo okanye ezinye iinkonzo.
I-Modern suite ineyunithi yomoya yombane eyenzelwe zombini umoya oshushu kunye nobandayo. Iremote ikwidrowa yedesika. Nceda uyicime iyunithi xa ingasetyenziswa (njengaxa uphuma). Indlu nayo inomoya ophakathi, kodwa iyunithi yombane inika induduzo eyongezelelweyo kunye nokulawula.
Kutshanje sifakele inkonzo ye-Intanethi yegigabit fiber ene-mesh routers kwindlu yonke. Kufuneka kungabikho iingxaki nge-WiFi ecothayo.
I-Modern suite yinxalenye yendlu enkulu. Kukho ucango oluvaliweyo, lutshixiwe olwahlula igumbi leendwendwe kwindlu yonke. Nceda uqaphele ukuba indlu yethu indala kwaye ihamba kakuhle. Nangona indlu yethu "ingxolo," mhlawumbi uya kuva abanye bejikeleza indlu ngexesha lasemini. Sinyanzelisa iiyure ezizolileyo ukusuka ngo-10pm-7am, kwaye sikwabonelela ngee-earplugs njengembeko eyongezelelweyo kubantu abalalayo. Nangona kunjalo, ukuba ujonge amava angasese ngokupheleleyo okanye ukubaleka ngokusondeleyo, ke i-Modern suite isenokungabi lolona khetho lwakho.
UMama kaJessica uhlala kwindawo enkulu yendlu. Sikwabamba undwendwe lwesibini kumgangatho wokuqala ngezantsi kwendlu yanamhlanje. Nangona kunjalo, ngexesha lokuhlala kwakho, akukho mntu wumbi uya kuba nokufikelela kwi-Modern suite ngaphandle kwakho.
4.92 out of 5 stars from 615 reviews
4.92 · Izimvo eziyi-615
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi615
Indawo esihlala kuyo inamahlathi kwaye inoxolo. Akukho ngxolo yezithuthi okanye endleleni. Uninzi lwezindlu zakhiwa ngeminyaka yoo-1970. Nceda upake kwi-driveway ukuba ayinazo ezinye iimoto okanye esitratweni ngqo phambi kwendlu.
Izimvo eziyi-1 556
UMama kaJessica uhlala endlwini, kodwa thina (uJessica noAndy) asikho. Sihlala kumgama weekhilomitha ezimbalwa kwaye siphendule ngokukhawuleza naluphi na unxibelelwano oluvela kwiindwendwe zethu. Qaphela ukuba sikwaqhuba nenye i-suite yeendwendwe eyahlukileyo endlwini, ukuze ukwazi ukudibana nezinye iindwendwe ngaphandle.
UMama kaJessica uhlala endlwini, kodwa thina (uJessica noAndy) asikho. Sihlala kumgama weekhilomitha ezimbalwa kwaye siphendule ngokukhawuleza naluphi na unxibelelwano oluvela kwii…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cary